१. स्क्र्याचबाट र फ्रान्चाइजी बिना तपाईंको आफ्नै फूल।
कसरी स्क्र्याचबाट र फ्रैंचाइजी बिना आफ्नै फूलको पसल सुरू गर्न। (ए.ए. येल्चेनोनोभ द्वारा पुस्तक)
उसको आफ्नै फूलको पसल खोल्ने विचारले एक व्यक्तिलाई बारम्बार भेट दियो जसको फ्लोस्ट्रीको जुनसुकै लामो समयदेखि फूलको साधारण प्रेमको कारण एक व्यावसायिक गतिविधिमा बढेको छ। यहीँ मैले सँधै सपना देखेको छु।
S ० को दशकमा फर्किएपछि मैले एउटा फूल व्यवसाय शुरू गर्ने निर्णय गरेँ र मेरो पहिलो फूलको कियोस्क खोलें। यो विचार एक सफलता थियो, र पछि संयुक्त राज्य मा एक स्टोर संग सफलता दोहोर्याउन व्यवस्था। चाँडै, मसँग थुप्रै आउटलेटहरू थिए जसले राम्रो आय आर्जन गरिरहेका थिए। मलाई लाग्छ कि सफल सफल व्यवसायको मेरो अनुभव धेरैका लागि उपयोगी हुनेछ। यस अनलाइन ब्लगमा, मँ तपाईको आफ्नै सानो पसल कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुराको केहि रहस्यहरु उजागर गर्दछु जसले तपाईलाई मन पराउने गतिविधिहरु र तपाईको कामको लागि मौद्रिक पुरस्कार मा खुशी ल्याउँछ।
मैले यसलाई कसरी व्यवस्थित गरें? सबैभन्दा पहिले, त्यहाँ एक ठूलो इच्छा र आफ्नै बल मा विश्वास थियो। दोस्रो, म के गर्छु भनेर माया गर्छु। तेस्रो, को लागी सनकी फूल व्यवस्था सिर्जना गर्न को लागी गुलदस्ते को वितरण र स्टोरको भित्ताहरू बीचको बिक्री, उनीहरूको रचनात्मक विचारहरू महसुस गर्न र उनीहरूलाई साझा गर्न को लागी इच्छा। कठिनाइहरू पार गर्नमा मेरो दृढता, मलाई चाहिएको चीजको तृष्णाले मलाई सफलता हासिल गर्न मद्दत गर्‍यो। मैले तपाईंसँग सपना देखि मेरो आफ्नै फूलको कारोबार खोल्न को लागी अनुभव साझा गर्न हतार गरेँ।
अन्य शौकहरू जस्तै, फूलहरूको प्रेमलाई पैसाको लगानी आवश्यक पर्दछ र लामो समय लिन्छ। बिस्तारै, यो बानीमा परिणत हुन्छ, दैनिक गतिविधिहरू दिनचर्या बन्न जान्छ, नयाँपनको भावना हराउँछ। यो प्रक्रिया अपरिहार्य छ, यो अवस्थाको सर्तमा मात्र आउँदछ। तर कुराकानी यस बारेमा छैन।
बिस्तारै, फ्लोरिस्ट्रीमा साधारण रुचि वास्तविक जोशमा परिणत हुन्छ, मनमोहक, बेकनिंग र पूर्ण रूपमा अवशोषित र एक ट्रेस बिना। परिवारका सदस्यहरू यस प्रक्रियाबाट टाढा बस्दैनन्। फूल जादू सबैलाई आकर्षण गर्दछ जो प्रक्रियामा कमसेकम कुनै तरिकामा समावेश छ। संलग्नताबाट बच्न सकिन्न र चाँडै नै सबै परिवारका सदस्यहरू एक साझा उद्देश्यको विकास गर्न सँगै मिलेर काम गर्ने प्रयास गर्दछन्।
तपाइँ धेरै जीवनशैली परिवर्तन गर्न तयार हुनु आवश्यक छ। जो कोहीले पनि फ्लोर व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरिसकेका छन् पहिले नै कम्तिमा फ्लोस्ट्री सम्बन्धी एक सानो अनुभव छ। जे भए पनि फूलको व्यापार गर्ने चाहना कहिँ पनि देखा पर्दैन, यद्यपि यो हुन सक्दछ। तर प्राय जसो केसहरूमा यो नियम भन्दा अपवाद हो। थप रूपमा, गुलदस्ताहरूको सरल बिक्रीले ठूलो मुनाफा ल्याएको समयहरू पनि गयो। आधुनिक फूल बजार बिभिन्न चीजहरूले भरिएको छ, र यसले आफैंमा अब उत्साह र अकल्पनीय चासो पैदा गर्दैन। व्यक्ति ग्राहक-उन्मुख सेवा, व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट व्यक्ति आकर्षित हुन्छन्। यी सबै पोइन्ट्स ध्यानमा राख्नुपर्दछ, र बिक्री राम्रो योजनाबद्ध छन्।
अर्को पृष्ठमा -> १. स्क्र्याचबाट र फ्रान्चाइजी बिना तपाईंको आफ्नै फूल।
पृष्ठ चयन गर्दै:
एकल-टाउको गुलाब कपास Eustoma ब्रुनिया Eucalyptus बक्स मा पाठ तपाइँको हुन सक्छ
२ 4400 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २304०
डिजाइनर क्राफ्ट पेपरमा १०१ बैजनी ट्यूलिप्सको गुलदस्ता।
२ 11550 XNUMX ₽ गुलदस्ता "बैजनी ट्यूलिप्स"
२ 6550 XNUMX ₽ अर्किड र Eustoma बक्स
टोपी बक्समा ro 37 गुलाब
२ 7875 XNUMX ₽ टोपी बक्समा ro 37 गुलाब
१० एक्वा गुलाबको गुलाबी टोनमा गुलदस्ता, pink गुलाबी peonies, लैभेंडरको १ गुच्छा, उपहार बक्समा १२ कपास (महसुस र शिल्प)।
२ 8700 XNUMX ₽ फूल "Agnessa" को गुलदस्ता
झाडी गुलाब र क्रिसेन्थेमम्सको मुटुको आकारमा फूलको व्यवस्था प्रेमको सबैभन्दा रोमान्टिक, कोमल र प्रभावकारी घोषणा हो! तपाईंको प्रियलाई अद्भुत फूलहरूको साथ प्याम्पर गर्नुहोस् र उनलाई बताउनुहोस् कि उनी कति महत्त्वपूर्ण र सुन्दर छिन्!
२ 4620 XNUMX ₽ प्रिय
चकलेट कभर स्ट्रबेरीको साथ बक्स।
२ 2288 XNUMX ₽ गुलदस्ता संख्या २12०
गुलदस्ताका लागि प्याकेजि:: क्राफ्ट पेपर, बुश २१pcs गुलाब भयो।
२ 9026 XNUMX ₽ स्प्रे गुलाब संख्या7को गुलदस्ता